Zimbabwe Declares July 31 Public Holiday - News Update - qppstudio.net
Zimbabwe's President, Robert Mugabe, has declared Wednesday, July 31, 2013, the recently confirmed date for the upcoming Presidential election, as a one-off non-working public holiday in Zimbabwe, in terms of the Public Holidays and Prohibition of Business Act.
Early this week (2013-07-22), Zimbabwe's Co-Home Affairs Minister, Kembo Mohadi, had announced that the government of Zimbabwe was deliberating on the possibility of declaring Wednesday, July 31, 2013, the recently confirmed date for the upcoming Presidential election, as a one-off non-working public holiday in Zimbabwe.
Recall that the Zimbabwe Constitutional Court unanimous confirmation of Wednesday, July 31, 2013, as the date of the upcoming Presidential election, which as per the recently-amended Electoral Act, will be a non-working public holiday in Zimbabwe (2013-07-08).
Contrary to past occasions (2013-03-14), today's announcement (SI 107A/2013) is no longer based on Section 2 (2) of the "Public Holidays and Prohibition of Business Act (Chapter10:21)", which gives Zimbabwe's President the power to declare special one-off public holidays, but rather on Section IX-39-2 of the Statutory Instrument 85/2013 (Zimbabwe Electoral Act consolidated as at 22 June 2013).
Below are links to the news stories referred to in the above "Zimbabwe Declares July 31 Public Holiday" news story, as well as links to subsequents news stories which refer to the present news story.